Uru nke azụmahịa electronic na ọghọm nke eCommerce | ECommerce ozi ọma
Eva Maria Rodriguez | | eCommerce, Ahịa
na azụmahịa uru kọmputa ha dị ọtụtụ ma e jiri ya tụnyere azụmaahịa ọdịnala. Ọ na-enyekwa ọtụtụ ohere maka ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ndị ahịa ọ bụghị naanị ka ha nwee ọwa ahịa ọzọ, kamakwa ịmepe ahịa ọhụrụ, kwalite ngwaahịa ha ma gbasaa ohere azụmahịa ha. N'echiche a, azụmahịa kọmputa bụ uru asọmpi na ohere azụmaahịa na-atọ ụtọ.
El azụmahịa igwe ndị na-azụ ahịa ikpeazụ (B2C) na Spain na-enwe a magburu onwe mmepe ma a ka nwere ọtụtụ ohere iji rigbuo. Ọ bụ ezie na anyị enweghị ike ileghara eziokwu ahụ anya na ọ ka nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme, bido azụmaahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ gbanwee nke ugbu a na-erite uru nke ihe niile eCommerce nwere ike.
1 Uru nke e-commerce
2 Kọ ihe ụfọdụ nke eCommerce
Uru nke e-commerce
Algunas de las azụmahịa uru kọmputa ma e jiri ya tụnyere azụmaahịa ọdịnala bụ ndị a:
Imeri oke ala.
Nweta ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ahịa ma na ntanetị ma na offline site na ịbawanye visibiliti nke allowsntanetị na-enye ohere.
Ego na mbido dị ala karịa azụmaahịa ọdịnala.
Ngosipụta dị ukwuu nke igosipụta ngwaahịa maka ọchụnta ego.
Ọ dị mfe na ngwa ngwa ịchọta ngwaahịa maka onye zụrụ ahịa.
Ichekwa oge mgbe ịzụrụ ihe maka onye zụrụ ya.
Oge kachasị maka oge azụmahịa na ọrụ ndị ahịa maka ndị were ọrụ.
Mfe nke itinye n'ọrụ na ịmepụta atụmatụ azụmaahịa dabere na ego, Kupọns, nza, wdg.
Ekwe omume nke inye ọtụtụ ozi ndị ọzọ na asịwo.
Mfe nke iji atụnyere n'etiti ngwaahịa, gụnyere njirimara na ahịa.
O doro anya na e-commerce ga-aba ọtụtụ uru ebe ọ bụ na oge na-aga, teknụzụ na-agbanwe, ịzụrụ ihe n'ịntanetị na-arịwanye elu maka pasent dị elu nke nzụta nke ndị ọrụ mere.
Kọ ihe ụfọdụ nke eCommerce
Agbanyeghị, anyị enweghị ike ịkwụsị ma tụlee ụfọdụ ọghọm nke eCommerce a ghaghi iburu n'uche nke a tupu ịmalite ma obu gbasaa ahia obula. Ha bụ ndị a:
Asọmpi a dị elu nke ukwuu, dịka onye ọ bụla nwere ike ịmalite azụmaahịa e-commerce (opekata mpe na ọkwa).
A ka nwere ọtụtụ ndị na-eri ego na-achọ ịzụrụ na-enweghị ahụ ngwaahịa na ndị anaghị atụkwasị obi ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị.
Gwọ Mbupu dị oke ọnụ mgbe oke azụmaahịa pere mpe, nke a bụ nnukwu ọghọm maka obere azụmaahịa.
Iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa siri ike karị ma chọọ usoro ọkachamara.
Kwalite ụlọ ahịa na ntanetị chọrọ ọrụ onwe onye karịa ịkwalite ụlọ ahịa na ọkwa n'okporo ámá.
Nchebe saịtị nwere ike inye ndị nwe ụlọ ahịa ọtụtụ isi ọwụwa.
Ọbụghị ngwaahịa niile enwere ike ịre ntanetị na ntanetị bara uru, yana usoro ịre ahịa ga-eji nlezianya nyochaa.
Ndị ahịa chọrọ ịnweta ya niile: ọnụahịa kachasị mma, ọrụ kachasị mma na nlebara anya ahaziri iche. Sọ mpi na usoro ndị a na-esiri obere ụlọ ọrụ ike ma e jiri ya tụnyere nke ukwu.
Na nkenke, eCommerce bụ nnukwu ohere, mana ọ dị mkpa nyochaa uru nke e-commerce na ọghọm ya ka ịbido ma ọ bụrụ na anyị nwere ezigbo ndụmọdụ gbasara azụmahịa. Ọ bụrụ na ị na-achọ echiche, nke a bụ ezigbo nhọrọ nke email ihe atụ.
Ọ nwere ike ịmasị gị - Mkpebi nke Report na Azụmahịa Egwuregwu na Spain (mbipụta 2013)
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » Ahịa » Uru na ọghọm dị na azụmahịa kọmputa
Ozi ọzọ dị mkpa iji banye na akaụntụ mgbe ị na-azụ ahịa site na nyiwe arụmọrụ bụ ọnụahịa.
Na blọọgụ anyị, anyị edeela akwụkwọ banyere uru na ọghọm nke ecommerce. Anyị kwetara n'ihe ụfọdụ, ọ bụghị ihe ndị ọzọ.
miguel n'ọtụtụ dijo
Ihe ederede magburu onwe ya, echere m na e nweela nnukwu ọganihu na ntanetị mmepe ụlọ ahịa n'ịntanetị, ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ihe iji melite, ọkachasị ndị mmepe nke usoro ịkwụ ụgwọ. Daalụ
Zaghachi ka miguel escala
Kedu ka esi eme ka ahia m di nfe?
Camila, dị ka ihe ndekọ ego ma ọ bụrụ na e nweghị ego na tiketi?
Ezigbo isiokwu. Worldwa ga-aga maka igwe ojii gburugburu ma gaa n'ihu na-eme ka Azụmahịa Elektrọnik dị mma
Etu ị ga-esi nweta uru asọmpi na obere eCommerce na Big Data